Umboniso wamanzi wamanzi waseShanghai we-2021
Umboniso wase-Shanghai wamanzi we-2021 wabanjwa e-Shanghai World Expo Exhibition kunye neZiko leNgqungquthela ngo-Epreli 1 ukuya ku-3, ngaxeshanye ne-Asia Boat Show. Sityikitye isivumelwano kunye nomququzeleli wokubonelela ngamachibi amanzi kulo mboniso. Isakhelo samachibi ethu amanzi afakwa ...
Itanki lokuGcina amafutha kweThutyana leMigodi kunye nezoLimo
Iitanki zokugcina ipetroli ezinokuthenjwa ziyindlela efanelekileyo yokugcina ulwelo oluninzi kwifama yamafutha okanye kwindawo enkulu yokugcina indawo. Ukuhanjiswa kusongelwe kwaye kulula ukuhambisa, iitanki zethu eziguqukayo lukhetho olufanelekileyo lokugcina amafutha okwethutyana ...
Yaziwa njenge pilow bladder okanye lay-flat style tank, ezi ngxowa zihlala ziyindlela yoqoqosho kwaye ethandwayo yokugcina nokuhambisa amanzi aselwayo kunye nemvula, okanye idizili kunye nepetroli. Ngokulula okusongelayo kwaye ukukhanya okulula, zinokuhanjiswa zisiwe kwiindawo ezingenanto zingenanto, okanye zigcwele xa kuseto ...
Itanki lokuLima iintlanzi iTarpaulin elingeyiyo ityhefu
Itanki lokulima iintlanzi le-PVC kwifama yentlanzi yasemanzini, inkcubeko yethutyana, umboniso wentlanzi yokuhambisa iintlanzi, uyilo lokusonga ngenkxaso yombhobho wePVC. Sinikezela ngeeNkqubo eziQinisekayo zoLondolozo lwamanzi (RAS). Inokuvelisa inani elikhulu leentlanzi kwindawo encinci, ukunciphisa ukusetyenziswa komhlaba weentlanzi ...